आनन्दप्रसाद पोखरेल, मन्त्री –संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल भूकम्प र नाकाबन्दीलगायतका कारण अस्तव्यस्त बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न संवेदनशील भएर लागिरहनुभएको छ । त्यसै शिलशिलामा देश विदेशको कार्यक्रममा भ्याइनभ्याइ हुनुहुन्छ । उहाँ पर्यटनलाई मुलुकको तेस्रो प्राथमिकतामा राखिए पनि त्यसअनुरुप बजेट विनीयोजन नहुँदा सोचेअनुरुप काम कार्यक्रम अघि बढाउन नसकिएको बताउने उहाँको बुझाइ छ । आगामी बजेटमार्फत प्राथमिकताको आधारमा बजेटको व्यवस्था गरेर पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासमा लागिरहेको बताउने उनै मन्त्री पोखरेलसँग पर्यटन क्षेत्रको लािग सरकारले अघि बढाएको कार्यक्रम तथा पछिल्लो अवस्थाको समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तरंग कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिलेको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
पर्यटन क्षेत्रको लागि जति बजेट विनीयोजन गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकिएको छैन । पर्यटनलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रको बजेटलाई त्यही तेस्रो प्राथमिकताकै आधारमा विनीयोजन गर्ने हो भने हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकास दू्रत गतिमा अघि बढ्नेछ । विविध कारणले अहिले निजी क्षेत्रले अनेक खालका समस्या झेल्नुपरिरहेको छ । जस्तो, लगानी जोखिममा परेको छ, लोनको समस्यादेखि आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिएको छैन । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मैले आगामी वर्षको लागि नयाँ योजना क्याबिनेटमा पेश गरेको छु । पर्यटन क्षेत्रको लागि अहिले अत्यान्तै न्यून बजेट विनीयोजित भएको भएपनि निजी क्षेत्रले जुन रुपमा भूमिका खेलिरहेको छ त्यो सह्रानीय छ । जसले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र आशालाग्दो बनाइरहेको छ ।
तपाईभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरुबाट पनि भाषण गर्ने व्यवहारमा नउतार्ने दृष्टान्त छ, फेरी पनि त्यस्तै हुने हो की ?
यो कुरा मैले अहिले बोलेको होइन । अहिलेको परिस्थितिलाई जानकारी गराएको मात्रै हो । कसैले म यो गर्छु भन्ने कुरा त्यसको भिजनमा भरपर्ने कुरा हो । म अहिले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढिरहेको छु । त्यो योजना कार्यन्वयन गर्नको लागि त्यहीअनुरुपको बजेट विनीयोजन गर्नुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेटमा थप नयाँ कार्यक्रमलाई समेट्नको लागि अहिले देखि नै हामी हरेक पक्षबाट अभ्यासरत छौं ।
तपाई पर्यटनमन्त्रीमा बहाल भएपछि के के गर्नुभयो ?
भूकम्प र नाकाबन्दीलगायतका कारण विश्व बजारमा फैलिएको नकारात्मक प्रचारबाजीलाई रोकेर नेपाल सुरक्षित छ, घुम्न लायक छ भन्ने भौतिक सेवा सुविधालाई समयसापेक्षित बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विश्वलाई आकर्षित गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएर काम गरिरहेको छु । अहिलेसम्म त अर्काले पेश गरेको बजेटलाई आवश्यकताअनुरुप कार्यान्वयन गर्ने काम नै भइरहेको छ । आफंैले अघि बढाएको कार्यक्रमलाई बजेटमा पार्नको लागि नयाँ आर्थिक वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, मैले यही क्षेत्रमा लाग्नेहरुलाई कम्तीमा आशा, भरोसा र विश्वास जगाउने काम गरेको छु । लगानीकर्ताहरुलाई पनि आशा जगाएको छु । पर्यटनको बारेमा नयाँ भिजन सेयर गरिरहेको छु । जसमा साहसिक, धार्मिक, प्राकृतिक, साँस्कृतिकलगायत विविध पक्षलाई समेटेको छु र आगामी बजेटमा त्यहीअनुरुप समेट्ने तयारी गरिरहेको छु । ‘बुद्धिष्ट सर्किट’ लुम्बिनीदेखि पूर्व र पश्चिमसम्मको लागि बजेटको खोजी गर्ने, पशुपति क्षेत्रलगायतलाई समेटेर ‘पशुपति सर्किट’ निर्माण गर्न बजेट माग गरेको छु । होमस्टे पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि दश करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । यसको लागि पनि पहलहरु भइरहेको छ । विश्वबजारमा दीर्घकालीन पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि योजना बनिरहेको छ । यी चिजहरुलाई संस्थागत रुपमा बजेटले समेट्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कामहरु अघि बढाइरहेको छु । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको छ ।
अहिले तय भइसकेको वैशाख १२ गतेको कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलन बारेमा जानकारी दिनुस् ?
वैशाख १२ गते भूकम्प गएको एक वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको छ । भूकम्पमा निधन भएकाहरुको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली दिएर परिवारलाई सान्त्वना दिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई विशेष स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि थप नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नेदेखि पर्यटकलाई विभिन्न शुल्क मिनाह गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलन गरेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बढावा दिनको लागि हामी जुटिरहेका छौं । जसको लागि प्रधानमन्त्रीस्तरदेखि एनआरएनदेखि सम्बद्ध निकायहरु र विभिन्न विभागहरु गठन गरेर कामहरु अघि बढाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलन नेपालमा गर्नु भनेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको सुनौलो अवसर पनि हो । कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान पु¥याउन आह्वान गर्दछु ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनको लागि चाहीँ के गर्नुभयो ?
सरकारले सबै आफंैले गर्ने भन्दा पनि गर्ने निकायहरुलाई फ्यासिलेट गर्ने हो । प्रवद्र्धनको लागि जाने, भेट्ने कुराकानी गर्ने भइरहेको छ । आजको दुनियाँ त्यो मात्रै ठूलो होइन । प्रविधि तथा मिडियालाई उपयोग गरेर त्यसको माध्यमबाट पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनको लागि हामी त्यहीअनुरुप अघि बढिरहेका छौं । मिडियामार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नको लागि जे टु जे अवधारणा अघि बढाइएको छ । टान, नाट्टा, हानलगायत पर्यटकीय संघसंस्था, पर्यटन व्यवसायी, पर्यटन पत्रकार, टुरगाइडलगायतले आ–आफ्नो तवरबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । उनीहरुले खेलेको भूमिका अत्यन्तै प्रभावकारी पनि देखिन्छ । त्यसलाई थप प्रोत्साहन गर्दै विश्व बजारलाई विश्वास दिलाउने कोसिस गरिरहेका छौं । दृष्टिकोण र लगानीमैत्री बनाउने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट हौसला प्रदान गर्ने कुरामा कमी भएको छैन जस्तो लाग्छ ।
पर्यटन बोर्डको बजेट बाँडफाँड सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ, के हो यो कुरा ?
त्यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन्छु । बजेट बाँडफाँड आधार र प्रमाणसहित गरिएको छ । यो बजेट सम्बन्धित जिल्लाहरुको माग, सम्बन्धित पर्यटन विकास समितिहरुको सुझाव र मन्त्रालयहरुसँगको सहकार्य, योजना आयोगले गरेको निर्देशन, माननीय सांसदहरुको सुझावलाई समेटेर बनाइएको दस्तावेज हो । बनाउने काम गरेका हौं । बजेट आवश्यकताभन्दा कम भएको हुनाले सबैलाई समेट्न नसकिएको हुन सक्छ । पर्यटनको बजेट नबढाइकन त्यो समस्या समाधान गर्न सकिन्न । पर्यटन बोर्डको आलेप, मालेप सबै भइसकेको छ । त्यसैले समस्या छैन । टानको टिम्सको बारेमा केही समस्या हो । जसले गल्ती ग¥यो उसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले हेर्छ ।
टानको टिम्सबापतको रकम कहिले निकासा हुन्छ ?
पेस्कीस्वरुप हामीले २ करोड रुपैयाँ दिइसकेका छौं । टानले सबै हिसाबकिताब फस्र्याैट गर्ने बित्तिकै बाँकी रकम निकासा हुन्छ ।